AbakwaSamsung bayeka ukungena ngaphezu kwezigidi eziyi-17.000 ngemuva kokuhoxisa i-Galaxy Note 7 | Izindaba zamagajethi
Ukwethulwa kwe-Samsung Galaxy Note 7 sekuyinkinga yangempela enkampanini yaseKorea. Lapho nje amatheminali okuqala efika emakethe, izinkinga zokuqala zomlilo zokugcina zaqala ukuvela lapho ukulayishwa kwenziwa. Njengoba izinsuku zihamba abasebenzisi abaningi bayathinteka yile nkinga futhi abakwaSamsung baqala ukuhoxisa wonke amatheminali abewethule emakethe ukuze bawafake amanye, okuthe ngemibono kwaxazulula inkinga yokuqhuma, imililo nokushisa okuzenzekelayo. Kepha kuphinde kwavela izinkinga ngamatheminali athathelwe indawo yiSamsung, okuphoqa inkampani ngoMsombuluko odlule ukumisa ukukhiqizwa.
Kepha ngokusobala iSamsung ayicacisi kahle ngale nkinga futhi ukuthola isixazululo sayo kubonakala sengathi kuzothatha isikhathi eside kunaleso inkampani ekholelwe futhi izolo uthathe isinqumo sokuhoxisa le divayisi ekuthengiseni bese uzama ukuthola wonke amatheminali angakavezi zinkinga zokusebenza, noma ngabe ayengawesizukulwane sokuqala noma sesibili.
Ngezindleko zokushintsha iqoqo lokuqala lamatheminali, elinganiselwa ku- $ 1.000 billion, inkampani yaseKorea kufanele yeka ukubala izigidi eziyi-17.000 ocabange ukuzithola ngokuthengisa kwalesi siginali esikhathini esisele sonyaka kanye nengxenye yonyaka ozayo. Khumbula ukuthi isikhathi sikaKhisimusi sisondela futhi abakwaSamsung babekhethe i-Kumbuka 7 njengento yokufisa abasebenzisi abaningi kulo Khisimusi.
AbakwaSamsung badlale kakhulu ngalesi siginali esingayekanga ukukhombisa izinkinga futhi uthathe indlela esheshayo nephephe kunazo zonke yenkampani nabasebenzisi, yize kunemali enhle ezoyeka ukungena, kepha isithombe somkhiqizo kufanele sigcinwe futhi inkampani ibingafuni ukuzibandakanya ezinkantolo zabasebenzisi ezingapheli, futhi bafuna nokuxazulula inkinga njengenkampani yezingcingo ezizishisayo.
Esingakwaziyo ibanga leNothi lizohlala kangakanani emakethe, njengoba ihlotshaniswa namatheminali abambe umlilo, ngakho-ke isizukulwane esilandelayo singashintsha igama ukuze abasebenzisi bangaqhubeki nokulihlanganisa nezinkinga eziboniswe yiNothi 7 ngesikhathi sayo esifushane emakethe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » AbakwaSamsung bayeke ukungena ngaphezu kwezigidi eziyi-17.000 ngemuva kokuhoxisa i-Galaxy Note 7